3-da December Maalinta Caalamiga ah ee Dadka Naafada ah (warbixin) | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
3-da December Maalinta Caalamiga ah ee Dadka Naafada ah (warbixin)
Guud ahaan madaxda iyo shucuubta dalalka caalamka ayaa manta u dabbaaldegaya xuska maalinta caalamiga ah ee Naafada
Xuska maalinta Naafadaoo waa mid sanadle ah,waxaana lagu dhawaaqay 1992-dii,ka dib kolkii Qaramada Midooay ay soo saartay qaraar tirsugiisu yahay 47/3 oo khuseeya muhiimadda maalintaasi.
Xuskaaan ayaa ujeedku yahay in kor loo qaado fahamka arrimaha naafada iyo in la muujiyo xuquuqda iyo wanaagga ay leeyihiin dadka naafada ah.
Barnaamijka Qaramada Midoobay ee ku aadan xuska maalinta Naafada waxa uu dhiirigalinayaa in la helo isdhexgal bulsho iyo in dadkaasi ay ka qeybgalaan dhinacyada siyaasadda, ganacsiga iyo arrimaha kale ee wax u taraya umadda.
Iyada la raacayo nidaamka Qaramada Midoobay ee ay u dejisay dadka Naafada ah, wuxuu dhigayaa in xuquuqda iyo xorriyaadka aasaasiga ah ay yihiin kuwo aan la leexin karin, la taaban karin oo aan la qaybin karin .
Dadka naafada waxayna ka mid yihiin kuwa ugu daran ee ay dhibaatadu saameysey,waxay u badan yihiin in ay helaan daryeel caafimaad, waxbarasho, shaqo iyo ka qaybgalka bulshada,waana kaliya ee lagu hubiyo in dadka naafada ah aan laga tagin.
Qorshaha Qaramada Midoobay ee 2030-ka ayaa ah in la sii wado horumarka waara ee dadka Naafada ah ,iyadoo aan laga tageyn ballanqaadka la xiriira xaqiijinta xuquuqda dadkaasi.
Qaramada Midoobay waxay soo jeedineysaa in kor loo qaado wacyiga iyo horumarka dadka Naafada ah,isla markaana la dhowro xuquuqda iyo aragtida dadka naafada ah ee dunida.
Previous articleSafiirka Soomaaliya ee Masar oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka Xoogga
Next articleMareykanka oo adkeynaya shuruucda khuseysa xagga safarka